» प्रचण्डलाई ओलीको कडा प्रश्न! पाँच हजार मान्छे हत्याको जिम्मा लिन्छुु भन्नुको अर्थ के हो ? प्रचण्डलाई ओलीको कडा प्रश्न! पाँच हजार मान्छे हत्याको जिम्मा लिन्छुु भन्नुको अर्थ के हो ? – हाम्रो खबर
प्रचण्डलाई ओलीको कडा प्रश्न! पाँच हजार मान्छे हत्याको जिम्मा लिन्छुु भन्नुको अर्थ के हो ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा नेताको जिवनशैली र बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभएको नेताको विलासी जिवनशैली, नेताहरुको वर्ग उत्थान र बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ? नभएर हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
यस्तो छ उनको भनाई:
नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरुको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरुको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ ।म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ ररु यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?
प्रचण्डलाई ओलीको कडा जवाफः पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा लिन्छुु भन्नुको अर्थ के हो ?
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे शनिवार जबाफ दिएका छन्। ५३ बुँदामा समेटिएको ३८ पृष्ठको उक्त लिखित जवाफमा ओलीले प्रचण्डमाथि थुप्रै चुनौती दिएका छन्।
तपाईंले भनेको ुपाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस्। खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस्। उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
उनले भनेका छन् कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व त्यस कमिटी र त्यसका नेताले केन्द्रसँग परामर्श लिनु पर्दैन अनुमति लिनु पर्दैन ? प्रदेशका नेताहरूलाई आफूखुशी चल्ने स्वायत्तता प्राप्त छ ? मैले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको हुँ। तर मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले जेजस्ता तर्क अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ ती नजिरका रुपमा स्थापित भए भने कालान्तरमा ती निकै महङ्गो साबित हुने छन्।
नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ। म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला। तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु। तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?